I-Brand.net: UkuThengiswa kweNdawo yokuKhangela ngokuKhanya kunye neDatha Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 17, 2014 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Izolo bendinesidlo sasemini kunye nomhlobo olungileyo uTroy Bruinsma, umphathi ophumeleleyo wentengiso kunye nentengiso. Kwiminyaka eliqela eyadlulayo, sasisebenza kwimikhankaso yeposi ethe ngqo kaTroy xa wayesebenzela inkampani yentambo. Sisebenzisa ukucocwa kwedatha, idatha yabathengi bayo, idatha yabo yokubhalisela, idatha yabemi kunye neTON yomsebenzi… sikwazile ukujonga abathengi babo ngoku kwaye sachonga, ngabendlu, zeziphi iintsapho ezazinokubanakho ukubhalisela iiphakheji ezithile zekhebula okanye amajelo. Yayisisicwangciso esiliqili!
Ngokukhawuleza kwaye ngoku uTroy usebenzela IValassis, kwaye wandazisa kwinto abebesebenza kuyo neBrand.net. IBrand.net inesisombululo sentengiso yedijithali equka uluhlu olungenakuthelekiswa nanto lwama-2,000 + abanini kunye nemithombo yolwazi edibeneyo- edityaniswe kwiqonga elinye lenethiwekhi yentengiso.
kunye IBrand.net, Abathengisi banikwe amandla okufikelela kubaphulaphuli abajolise kubo kwinqanaba kumgangatho, umboniso onefuthe eliphezulu, ividiyo kunye nendawo ezihambayo. I-Brand.net ihlala igqitha kwiinjongo zephulo ezibaluleke kakhulu kubathengisi bophawu, ukubonelela ngempumelelo ngokuzibandakanya kwi-Intanethi, ulwazi kunye nokuthengwa ngaphandle kweintanethi.
Inkqubo icokisiwe kangangokuba iye yaya kungena kwiiNdawo zoJoliso lweNtengiso… ngokusisiseko imimandla yedilesi ye-IP eya kuthi ivumele abathengisi ukuba babonise intengiso kwimimandla ekujoliswe kuyo encinci. Njengoko kuchaziwe nguTroy, oku kunokubonelela ngokuthengisa ngokuzenzekelayo ukwenza iprofayili kubathengi babo kunye nokubonisa intengiso kwiindawo ezifanelekileyo kuyo yonke inethiwekhi yentengiso yabo ngokukodwa kubantu abakumgama wendawo yabo.
Wow… khawufane ucinge! Inethiwekhi yentengiso yaphuhliswa ukuze ichonge, ijolise kwaye iqhagamshele abathengisi kwezona zinto zilungileyo.
tags: inethiwekhi yentengisoimimandla ekujoliswe kuyo yentengisoatzuphawu.netbonisa intengisoUkujoliswa kwendawogeographygeotargetingI-valassis
Nceda sukuwa kwi-imeyile ye-imeyile SPAM